ASOJ oo bogaadin u dirtay Wasiirka Warfaafinta Somalia.
Monday July 05, 2010 - 05:12:21 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Mogadishu 04 May 2009
Ururka isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ ayaa Wasiirka Warfaafinta Dowladda Somalia Mr Farhan Ali Mohamud ku bogaadiyay go-aanka uu dhinaca dimoqoraadiyada u qaaday,kuna kala diray kooxdii sheegan jirtay golaha Suxufiyiinta qaranka Somalia.
"Waxaan marka hore hambalyo u dirayaa Wasiir Farhan Ali Gaban oo tilaabo farxad gelisay Saxaafadda Somalia hore u qaaday,runtii waxaan dareemeeynaa in Wasaaradda cusub ee Warfaafinta Somalia cagta saartay wado cadaaladeed maxaa yeelay waa qodob weyn in Weriyeyaasha Somalia doortaan golaha Qaranka Suxufiyiinta Somalia,si madax banaan,taasi macnaheedu waxay tahay inay meesha ka baxayaan kuwa magaca qaran ku qaraabta ee NGO ka dhigtay"ayuu yiri Gudoomiyaha ASOJ,Mr Dahir Alasow.
Hogaamiyaha ASOJ wuxuu weriyeyaasha Somalia dal iyo dibad ugu baaqay inay si wadajira u taageeraan go'aanka Wasiirka,ayna u diyaar garoobaan doorasho madaxbanaan oo Suxufi kasta xaq u leeyahay inuu isu sharaxo hogaanka golaha Suxufiyiinta Qaranka Somalia.isagoo dhinaca kalana amaan u jeediyay Gudoomiyahii golahaas Mr Abuukar Fareey oo si gobanimo leh u qaatay rabitaanka Suxufiyiinta Soomaaliyeed.
"Magaca Suxufiyiinta Qaranka Somalia waa mid ka dhaxeeya dhamaan Weriyeyaasha,ma ahan wax la qaadan karo in shaqsi iska sheegto oo weliba ay u diiwaangeliyaan dowladaha deriska nala ah qaarkood,taasi waxay tahay mid aan sina lagu aqbali karin,cidii dooneyso inay hogaamiso Suxufiyiinta Qaran ee Somalia,waxaa u furan munaasabada lagu dooranayo,qofkii aan Saxaafadda ku dhexlahayn sumcad ee qoowleeysatanimada ku caam noqotayna dabcan waxay ku naaloon doontaa murugo iyo laalaab"ayuu yiri Dahir Abdulle Alasow.
Beesha Caalamka iyo Ururadda Saxaafadda dunida ayuu Gudoomiye Alasow ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii Gole metela Suxufiyiinta Qaranka Somalia loo dhisi lahaa.
Ugu dambeyn wuxuu tacsi u diray ehelada iyo qarabaada ay ka tageen Weriyeyaashii xaqdarada loogu dilay gudaha Somalia ,isagoo dowladana ugu baaqay inay ka shaqeyso sidii Maxkamad loo soo taagi lahaa.